Sleeve House Kwekugara Kwemhuri - Dhizaini magazini
Kwekugara Kwemhuri Imba iyi yakasarudzika yakasarudzika yakavakwa neyakagadzirwa nyanzvi uye nyanzvi Adam Dayem uye ichangobva kuhwina nzvimbo yechipiri mumakwikwi eAmerican-Architects US Kuvaka kweGore makwikwi. Imba ye3-BR / 2,5-yekugezera yakarongedzwa pakavhurika, pakakunguruswa pamayadhi, mune iyo inonongedza zvakavanzika, pamwe nekushamisa kwemupata uye kuona kwemakomo. Seyakaomarara sezvazviri kuita, chimiro chakavezwa mudhirowa semavhoriyamu maviri akapindirana senge mavhoriyumu. Iyo yakasarudzika yakatsvairwa yakavezwa huni huni inopa imba imba yakaoma, yakaomeswa mameseji, kurudziro zvekare kwechigadzirwa chemadziro ekare mu Hudson Valley.
Zita rechirongwa : Sleeve House, Vagadziri zita : Adam Dayem, Izita remutengi : actual / office.
Kwekugara Kwemhuri Adam Dayem Sleeve House